Calaamadaha COVID-19-Dheg-dheer ee Dadka qaba Cudurrada Rheumatic-ka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Calaamadaha COVID-19-Dheg-dheer ee Dadka qaba Cudurrada Rheumatic-ka
Daraasad cusub oo ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka tirsan Cisbitaalka Qalliinka Gaarka ah (HSS) ee magaalada New York ayaa muujisay in ka badan kala badh bukaannada qaba cudurrada lafaha ee qaaday COVID-19 intii lagu jiray cudurka faafa oo dhammaystiray sahan COVID-19, oo khibrad u leh waxa loogu yeero "dheer-dheer" COVID, ama calaamadaha caabuqa ee daba dheeraada, oo ay ku jiraan luminta dhadhanka ama urta, murqo xanuun iyo dhibaato u-fiirsashada, hal bil ama ka badan.
Natiijooyinka lagu aqoonsaday muddada dheer ee COVID ayaa si gaar ah ugu sareysa dadka sigaarka cabba, bukaannada qaba cudurrada sida xiiqda ama cudurrada sambabada, kansarka, cudurrada kalyaha ee raaga, sonkorowga, wadne xanuunka oo istaaga ama wadnaxanuun myocardial, iyo kuwa qaadanaya corticosteroids.
"Ogaanshaha saameynta dhibaatadani waa mid muhiim ah," ayuu yiri Medha Barbhaiya, MD, MPH, rheumatologist HSS oo hogaaminayay daraasadda. "Bukaannada rheumatology-ga, muddada dheer ee COVID waxay si gaar ah u yeelan kartaa caqabad maadaama bukaannadani ay horeba u lahaayeen arrimo caafimaad oo dabadheeraad ah waxayna dammaanad qaadayaan baaritaan dheeri ah."
Dr. Barbhaiya iyo asxaabteeda ayaa soo bandhigay daraasadooda, "Arimaha Khatarta ah ee 'Dhegdheer Dheeraadka ah' COVID-19 ee Bukaan-socodka Rheumatology ee Magaalada New York," kulanka sannadlaha ah ee Kulliyada Maraykanka ee Rheumatology (ACR).
Daraasadda, kooxda Dr. Barbhaiya waxay iimayl u dirtay sahanno 7,505 rag iyo dumar ah oo da'doodu tahay 18 sano iyo wixii ka weyn kuwaas oo lagu daweeyey HSS cabashooyinka rheumatologic intii u dhaxaysay 2018 iyo 2020. Ka qaybgalayaasha ayaa la waydiiyay inay heleen tijaabo togan oo COVID-19 ah ama haddii Waxay u sheegeen bixiye daryeel caafimaad inay qaadeen caabuqa.
Cilmi-baadhayaashu waxay ku qeexeen infekshannada COVID-19-dheer-dheer inay yihiin kuwa leh astaamo soconaya hal bil ama ka badan, halka kiisaska muddada xaddidan loo tixgeliyey kuwa leh astaamo socda wax ka yar hal bil.
2,572 qof oo ka mid ah kuwa dhameeyay sahanka, ku dhawaad ​​56% bukaannada soo sheegay inay ku dhaceen COVID-19 ayaa sheegay in astaamahooda ay socdeen ugu yaraan hal bil. Kaliya laba bukaan oo daraasadda ku jira ayaa hore u lahaa cudurka fibromyalgia - xaalad lagu calaamadeeyay daal, murqo xanuun iyo calaamado kale oo lala xiriiriyay COVID-ka dheer - taas oo soo jeedinaysa in isku-dhafka labada cudur uu yahay mid aad u yar.
"Natiijooyinkayagu ma soo jeedinayaan in calaamadaha fibromyalgia si khaldan loo fasiro inta lagu jiro muddada dheer ee COVID ee bukaannada qaba cudurrada rheumatic, taas oo ah wax la soo saaray oo suurtogal ah," ayay tiri Lisa A. Mandl, MD, MPH, rheumatologist at HSS iyo qoraa sare ee daraasadda cusub.
Cilmi-baarayaasha HSS waxay qorsheynayaan inay u adeegsadaan xogta iyada oo qayb ka ah falanqaynta dheer ee bukaannada rheumatology ee qaba COVID-dheer-dheer si loo go'aamiyo haddii calaamadaha caabuqa ay farageliyaan xaaladdooda rheumatologic. Kormeerka joogtada ah ee bukaannadan ayaa bixin doona aragti muhiim ah oo ku saabsan saameynta muddada dheer ee COVID-19 ee bukaannada qaba cudurka lafaha.